MAXON: ရုပ်ရှင်ရုံ 4D ဖြန့်ချိမှု ၁၉ | NAB သတင်းများ | 19 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » MAXON: ရုပ်ရှင်ရုံ 4D ဖြန့်ချိ 19
[wpdevart_youtube width =” 640″ height =” 385″ autoplay =” 0″ theme =” dark” loop_video =” 0″ enable_fullscreen =” 1″ show_related =” 1″ show_popup =” 0″ thumb_popup_width =” 213″ thumb_popup_height =” 128″ show_title = "1″ show_youtube_icon =" 0″ show_annotations = "1″ show_progress_bar_color =" အနီရောင် "autohide_parameters =" 1″ set_initial_volume = "false" initial_volume = "100″ disable_keyboard =" 0″] 4ujLdToutube |
အဆိုပါ MAXON ၏ကြေငြာချက် ရုပ်ရှင်ရုံ 4D ဖြန့်ချိ 19 ပိုမြန်ပိုတည်ငြိမ်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူ Workflows ကိုဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်နာများ enable ပါလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီ၏ထားသောစာပိုဒ်တိုများမှတ်သားတချို့ features အသစ်ကမ်းလှမ်းထားတဲ့သစ်ကိုဖြန့်ချိ 19 "မနက်ဖြန်ယနေ့, နည်းပညာများအတွက် Tools များ။ " အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထောက်ပံ့ပေးအနေဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောအင်္ဂါရပ်စာရင်းဖြစ်ပါတယ် MAXON:
Alembic module ကိုယခု Alembic 1.6.1 SDK ကိုအပေါ်အခြေခံသည်
Alembic ယခု subframe Interpol ထောက်ခံပါတယ်
"အခြား Attribute တွေက" option ကိုနောက်ထပ်အချက် attribute တွေ၏သွင်းကုန်ဖွ
ပို့ကုန်ယခုလောဒမွို့ Object ကိုထောကျပံ့
Alembic Generator ကို
Alembic Morph Tag ကို
FBX module ကိုယခု FBX SDK ကို 2017.1 အပေါ်အခြေခံသည်
FBX လောဒမွို့အဖွဲ့များများအတွက်ပံ့ပိုးမှု (သွင်းကုန် / ပို့ကုန်) ကဆက်ပြောသည်
"ရွေးချယ်ရေးသာလျှင်" option ကိုသာရွေးချယ်ထားတ္ထုတင်ပို့ဖို့ကဆက်ပြောသည်
"ကမ္ဘာ့ Coordinates" option ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစားဒေသခံသြဒီနိတ်နှင့်အတူတ္ထုကယ်ဖို့ကဆက်ပြောသည်
RPF ယခုပစ္စည်း၏ ID ကိုကယျတငျနိုငျ
နယူး option ကို "အဖွဲ့များ (အမည်ဝင်တိုက်ခြင်းပေါင်းစပ်)
Houdini အင်ဂျင် 16.0.633 မှနောက်ဆုံးရေးသားချိန်
လုပ်ငန်းအသွားအလာ / UI ကို:
နယူး Feature ကိုထင်သာမြင်သာ
လက်ရှိနှင့်ယခင်ဗားရှင်းအသစ် features တွေမီးမောင်းထိုးပြ
မီဒီယာသစ် Core ကိုင်တွယ်ခြင်း
ရုပ်ရှင်ရုံ 4D အတွက်ပိုကောင်းတဲ့မီဒီယာပံ့ပိုးမှု
ဒေတာများကိုပိုမိုထိရောက်သော loaded ရရှိ
Layerset ရွေးချယ်သူသည်ယခုအခါ (ပေါင်းစုံစာမျက်နှာ TIFF ဖိုင်တွေအတွက်ဥပမာ) ပေါင်းစုံစာမျက်နှာ / စီးပုံရိပ်တွေကို support
Layerset ရွေးချယ်ယခုရုပ်ရှင်စီး၏ access ကိုနှင့်ရွေးချယ်ရေးခွင့်ပြု
alpha channel များကိုတစ်ဦးမင်းထက်အရေအတွက်ပံ့ပိုးမှု
အားလုံးပုံရိပ် / Movie, ကို formats များအတွက် format ကြိုပြီးချမှတ်ထား
ဆုံးဖြတ်ချက်အပြောင်းအလဲများကိုလျှင် Movie, Data Rate လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ option
texture မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အရောင် profile များကိုရှိနိုင်ပါသည်
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများအတွက် embedded အရောင် profile များကိုတင်ဆောင်နိုင်ပါတယ်
Anamorphic ကို formats ကတော့ရုပ်ပုံ Viewer တွင်ပြန်လည်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်
TIFF ဖိုင်တွေ compressed နိုင်ပါသည်
pixel ရှုထောင့်ရိက္ခာ / တင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်နိုင်ပါတယ်
CMYK နှင့် YUV ပုံရိပ်တွေအဘို့ သာ. ကောင်း၏ပံ့ပိုးမှု
3D texture အမြင်ကတော့ greyscale အရောင်ပရိုဖိုင်းကိုထောကျပံ့
အဆိုပါပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု Manager တွင် command ကိုနယူး "Folder ကိုထံမှ Load တ္ထုများ"
တင်ဖိုင်များကို image / ရုပ်ရှင်ရွေးချယ်စရာကိုအောကျမေ့နေကြသည်, ရုပ်ပုံများနှင့်ရုပ်ရှင်အတူတူပင်ဆက်တင်များဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်နိုင်ပါတယ်
အဆိုပါအကြောင်းအရာ Browser ကိုယခုတစ်ထပ်နှင့်အတူပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုခြေတစ်လှမ်း
အဆိုပါ Vertex အရောင် tag ကိုပု vertext အရောင်များကိုအဆက်မပြတ်ပြသနိုင်သည့်နှင့်အတူသစ်တစ်ခု option ကိုရှိပါတယ်
အဆိုပါရုပ်ပုံ Viewer တွင်အဆိုပါကယ်တင်ပေးတဲ့ dialog window ကိုယခု anamorph ဗီဒီယိုများကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်
ပူးတွဲကိုက်ညီမှုအယ်လဂိုရီသမ် (Hierarchy-based, Coordinates-based, အမည်-based)
တိုးတက် Point-ကိုက်ညီမှုရှိသည့် Algorithm (တိုးတက်လာအနီးဆုံးပွိုင့်, ပုံမှန်အနီးဆုံးပွိုင့်)
1-နှိပ်ပါလုပ်ဆောင်ချက်ကို w ကြေးမုံ Tool ကိုပေါင်းစည်းရေး /
အလေးချိန် Manager ကပေါင်းစည်းရေး
အလေးချိန် Manager ကတိုးတက်မှု
အဆိုပါအလေးချိန် Manager တွင်အများအပြားလုပ်ငန်းအသွားအလာတိုးတက်မှု
WM Refactoring: အအလေးချိန် Tool ကို, မြင်ကွင်းတစ်ခုနှုန်းအလေးချိန် Manager မှ Separated အလေးချိန် Manager ကို
အကွိမျမြားစှာအလေးချိန် Manager ကို Windows အတွက်
ပူးတွဲစာရင်း Workflows တိုးတက် (မျိုး folder ကိုထောက်ခံမှုအပါအဝင်အသစ်သောအလေးချိန် Tag ကိုအတူစိတ်တိုင်းကျစာရင်းအမိန့်ပိုမိုညီစာရင်းပုန်းအောင်းအဆစ်ကို support)
တိုးတက် Spreadsheet လုပ်ငန်းအသွားအလာ (ပိုတသမတ်တည်း filtering ကိုအသစ် filter များ)
အဆိုပါ scripting နည်း API ကိုမှလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖော်ထုတ်
အလေးချိန် Tool ကိုတိုးတက်မှု
Tool ကို refactoring နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု
အဆိုပါ viewport အတွက်ပူးတွဲသွဇာကိုရွေးချယ်ပါ
နယူးမသမာမှုများနှငတိကျတဲ့ layout ကို
တိုးတက်ပညတ်တော်တို့ကို (Bind အကွိမျမြားစှာတ္တု)
PSD (Space ကိုပုံပျက်သောဖြစ်စေ) ကဆက်ပြောသည်
object တစ်ခု၏ Undeformed ဗားရှင်းယခုတင်းကျပ်ခန္ဓာကိုယ် Simulator အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ
တိုးတက် Voronoi ကျိုး
အလိုအလျှောက်အပိုငျးပိုငျးအကြား Connectors တစ် setup ကိုဖန်တီးရန် "အော်တို Connector" ။
အတူတူအပိုငျးပိုငျးပေါင်းစည်းဖို့ "ဂျီသြမေတြီ Gluing"
"စီရန်" အသစ်တစ်ခုကို Tab ကိုရွှေ့လိုက်ပြီ
နယူး sorting mode ကို "အရာဝတ္ထု"
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုနယူး "ချုံ့ချဲ့ Piece" voronoi ဆဲလ်မှုအဆင့်
"အော့ဖ်ဆက်အပိုင်းအစများကို" ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုယခုဒီကွာဟချက်ပါဝင်သည်ဟုတဦးတည်းအရာဝတ္ထုဖန်တီးမည်, inverted နိုင်ပါသည်။
"Hull ကသာလျှင်" အခုအထူရှိနိုင်ပါသည်
အဆိုပါအက်ရလဒ်များကိုယခု .c4d ဖိုင်ထဲတွင်သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်
အများကြီးပိုကောင်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့အနား count ကအရာဝတ္ထုကျိုးအခါ။
နယူး User Interface
အတော်ကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့်အတူအသံနမူနာကော။ သည် Modes နမူနာကော: Peak / ပျမ်းမျှ / အဆင့်
Clone မှစုံစမ်းစစ်ဆေး map မှကွဲပြားခြားနားသော Modes သာ (ကြားမှာ / ဖြန့်ဝေ / Blend)
အဆိုပါ Clone အရောင်ရွေးရန်မှကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများ
effectors များအတွက်အရင်းအမြစ် falloff များအတွက်တိုးတက်တိကျ
volume ကို effector ၏တိုးတက်လာသောမြန်နှုန်း
မျိုးကွဲများ၏ Shader များအတွက် Mode ကိုအော့ဖ်ဆက်နယူးခရမ်းလွန် Tile
အပြောင်းအလဲ Shader ယခုတွင်လည်းဆံပင်ပစ္စည်းများမှာအလုပ်မလုပ်
"ProRender" အင်ဂျင်ဆပ်အခြေစိုက်အသစ်တစ်ခု GPU ကို
MacOS ပေါ်တွင် Windows နဲ့ AMD ၏ကတ်များအပေါ် Nvidia နှင့် AMD ၏ကတ်များအလုပ်လုပ်, OpenCL 1.2 အပေါ် အခြေခံ.
အလွန်ထိရောက်သောလာခြင်းနှင့်အတူ multi GPU ကိုထောက်ခံကြောင်း
interactive ကို Preview viewport အတွက် Render
နယူး PBR အခြေစိုက်အလင်းနှင့်ပစ္စည်းအမျိုးအစား
ပိုးစုန်းကြူး filter ကို
ကြီးမားသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအဘို့အ rendering ပုံး
ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးကိုယ်ထိလက်ရောက်-အခြေခံပြီးအရိပ်တို့ကပိုကောင်းသလိုအလင်းပြန်မှုရုပ်သံလိုင်း preview ကို
စတုဂံနယ်မြေအလင်းအိမ်ကနေအစာရှောင်ခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန် illumination ။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ကွင်းဆင်း၏အတိမ်အနက်ကိုကိုက်ညီ Bokeh (မြှေးပုံသဏ္ဍာန်များအတွက်ထောက်ခံမှု) နဲ့ကွင်းဆင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အတိမ်အနက်ကို, နီးကပ်စွာ Render ။
မျက်နှာပြင် Space ကိုရောင်ပြန်ဟပ်
ဧရိယာအလင်းများယခု viewport ထဲမှာအစိုင်အခဲအဖြစ်ကိုပြသနိုင်ပါတယ်
360 °နှင့်ခုံးပြန်ဆိုဖန်တီးပေးရန်နယူးကင်မရာ option ကို
အဆိုပါ viewport ထဲမှာကြည့်ရန်အထောက်အ၏နယူးဖျော်ဖြေမှု
(လတ်-Long က, ကုဗ-လက်ဝါးကပ်တိုင်, ကုဗ-3 × 2, ကုဗ String) ကွဲပြားခြားနားသောမြေပုံများကို formats ထောက်ခံပါသည်
stereoscopic တင်ဆက်မှုကို support
clients ဆာဗာလက်လှမ်းမမှီပါလျှင်ပင်, rendering ကိုဆက်လက်
နယူးအလိုအလျောက် Service ကို Discovery
နယူး Tonemapping Post ကို-Effect
စံ Renderer များအတွက် Speedups
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ Standard Render အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ Transparency များအတွက် Speedups
အဆိုပါဟာ့ဒ်ဝဲ OpenGL Renderer များအတွက် setting Supersampling
အဆိုပါဟာ့ဒ်ဝဲ OpenGL Render များအတွက် Shadowmap filtering ကိုတိုးတက်မှု
လက်ငင်းပစ္စည်း updates များကို
အသစ်ကခေတ်သစ်မော်ဒယ်လင်း Kernel ၏ပထမဦးဆုံးလူ့ဇာတိ
လေယာဉ် Primitive Generator ကို
ပြောင်းပြန် Normal စစ်ဌာနချုပ်
align Normal စစ်ဌာနချုပ်
အနားလျှော့ချရေး Generator ကို
ကို Reverse Normal နှင့်ညှိရန် Normal ပညတ်တော်တို့ကိုအဘို့ "ကို Reverse အသုံးပြုသူ Normal" option ကိုနှင့်အတူနယူး command ကို option ကိုပေးတဲ့ dialog ။
ကွဲပြားခြားနားသောစံနှုန်းများအပေါ်အသေးစိတ် Levels ၏ switching အဆင့် (အသုံးပြုသူအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော, အသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုး, မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားဒေါင်လိုက် / အလျားလိုက် / မျက်နှာပြင်, ကင်မရာအဝေးသင်, Project မှလောဒမွို့)
ကလေးများ mode ကို
manual Group မှ Node
အနားလျှော့ချရေးယခုအခါ Generator ကိုဖြစ်ပါတယ်
နယူးလျှော့ချရေး algorithm ကို
လျှော့ချရေးတစ်ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်သို့မဟုတ်ကျန်ရှိသောအနား, အနားသို့မဟုတ် vertices အရေအတွက်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်
ဖြစ်စဉ်ကိုပုံမှန် Tag ကို
အမျိုးအစား (RGB (XYZ တန်းဂျ)
အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုခြေရာကောက် 3D အပေါ် အခြေခံ. မှတ်တမ်းတင်ထားသောမြင်ကွင်းတစ်ခု၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး, ဒေတာဖြေရှင်း
motion Tracker မြှင့်တင်
manual ခြေရာကောက်ယခု R ကို, G B သို့မဟုတ်ထုံးစံလိုင်းများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်
ဗီဒီယိုဖိုင်ယခု "Tracker ကြည့်ရန်" ကိုသာဥပမာအနီရောင် Channel ကိုအဖြစ်ပြသနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Tracker ယခုမြို့ပတ်ရထားခြေရာခံခြင်းပုံစံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်
User Interface ပြုပြင်မွမ်းမံ
တိုးတက်ကြီးပွားခြင်း / selection ချုံ့, ခရမ်းလွန်အနားနှင့်အမှတ်များအတွက်ကျွန်းများကိုရွေးဖို့ချိတ်ဆက်နှင့်ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ Select လုပ်ပြီးအပါအဝင်တိုးတက်ခရမ်းလွန် selection
ရွေးချယ်ရေးယခု UVs ထောက်ခံပါတယ်ပြောင်း
Manager ကယခု UVs ထောက်ခံပါတယ် Coordinate
ခရမ်းလွန်မှတ်နယူးကိန်းဂဏန်း Editor ကို
BodyPaint ယခု OpenGL အပေါ်အခြေခံသည်
နယူး BodyPaint options ကို save
ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအားဖယ်ရှားခဲ့ပြီး rendering, အဆိုပါ Rendering အစားရေစာရပါလိမ့်မယ်
အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို MAXON တစ်ဦးစမ်းသပ်မောင်းနှင်သို့မဟုတ်ဝယ်ယူဘို့ရုပ်ရှင်ရုံ 4D ဖြန့်ချိ 19:
ဤတွင် Go: www.maxon.net/en/products/new-in-release-19/overview/
MAXON 3D ကာတွန်း software ကိုတစ်ဦးခေါင်းဆောင်သည်။ ၎င်း၏ဆုရရုပ်ရှင် 4D နှင့် BodyPaint 3D ဖြေရှင်းချက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသုံးပြုကြသည်။ MAXON တစ်ဦး Nemetschek ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ယခင်: ky ဒစ်ကင်းဂိကင်ပိန်းအတွက်ခွေးနှင့်သူတို့၏ပိုင်ရှင်များအကြားမေတ္တာကိုဖမ်းယူ
နောက်တစ်ခု: IBC 2017 - VIDELIO ၎င်းတို့အား 4K နှင့် IP ကိုကျွမ်းကျင်မှုမျှဝေ၎င်းတို့အား SMPTE-2110 READY က OBS AND STUDIO အခြေခံအဆောက်အအုံတွေအတွက် Designs ပြ